Induction Heating titanium sy vy tsy miovaova ho an'ny fizotrana lohataona mafana
Home / Applications / Induction Heating / Induction fanafanana titanium sy vy tsy misy fangarony ho an'ny lohany mafana
Induction Heating titanium sy vy tsy miovaova ho an'ny lohapezy mafana
Sokajy: Induction Heating Tags: fanamainana vy vy, fanafanana Ti sy SS fampidirana, Titanium fanafanana, Fanafanana titanium sy vy vy, Titanium fanafanana HF, induction heating, fampidirana titanium mafana, fampiroboroboana fanafanana induction, fanamafisana induction SS, titanium fanafanana fampidirana, titanium mafana fampidirana
hatrany induction heating tady titanium sy vy tsy misy fangarony ho an'ny lohateny mafana
Fitaovana: 0.04 "(1.2mm) tariby titanium OD, 0.09" (2.4mm) tariby vy vy OD
Temperature: 700 ºF (371 ºC)
Fitaovana • Rafitra fanamafisana DW-UHF-20kW, miaraka amina workhead lavitra misy capacitor 0.5µF iray.
• An Indonezianina fanalefahana nohavaozina sy namboarina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Kodiarana helika efatra mihodina miaraka amin'ny busswork 20 "(50.8cm) no ampiasaina hanefana hatrany ny tariby. Ny tariby dia mamakivaky ny coil amin'ny taha 95 amin'ny isa-minitra, mitazona hafanana tsy tapaka 700 ºF (371 ºC) alohan'ny lohataona mafana.
Fitantarana • 20 "(50.8cm) busswork dia takiana noho ny toerana misy ny fizotran'ny mandeha ho azy. Mampiasa fitaovana DW-UHF ny mpanjifa amin'izao fotoana izao ary manavao ny fitaovany ankehitriny. Nisafidy ny HLQ izy ireo noho ny zavatra niainany teo aloha tamin'ny fitaovana fanamafisam-peo sy fanohanan'ny HLQ.
• hafanana tsy voafehy tsy tapaka